Home » Freebies » Kpee OZI AJỤ AHỤ AHỤ AHỤ
Ihe ka otutu ndi mmadu mara ugbua nke ihe ndi ozo bu iri nri na igosi nke oma ... ma oburu na enwere uzo di mfe iji kwado ihe mgbaru ọsọ gi? Ọ ga-amasị gị ịnụ banyere ya? Ọfọn ebe a. Ọ bụ mmeju a na - akpọ NatureThin.
NatureThin bụ onye na-eri anụ anaghị eri anụ nke jupụtara na nri ndị dị mkpa na-enyere ndị mmadụ aka ịkwụsị nha. NatureThin na-enye vitamin AE, potassium na biotin. Otutu ndi mmadu adighi adi na vitamin ndia. Ntinye mgbakwunye a, nke e mere iji nyere aka kwadoo ọnwụ nke ezi ahụ ike, ebe ọ na-enye oge dị mkpa vitamin na nri ndị ị chọrọ ... .anyere aka nyere gị aka ịgafe ihe ngosi ọnwụ gị!
Ozi ọma ndị ọzọ gbasara NatureThin bụ na i nwere ike nwalee ya maka ibu! Maka obere oge nanị, ịnwere ike ịnweta ụbọchị 16 maka ọnwụnwa nke NatureThin ka i wee hụ ihe ọ bụ tupu ị kpebie ịzụta ya. Pịa ebe a iji kwuo klaasị ịnwere n'efu nke NatureThin.